Ikhaya IZITOLO ZASESI FOOTBALL I-Takefusa Kubo Ubuntwana Bendaba ye-Plus Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola okwaziwa ngegama elithi “Genius”I-Messi yaseJapan"I-Takefusa Kubo yethu Yobuntwana Indaba Yezindaba Zasekhaya kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
I-Takefusa Kobo Ingane Yendaba Yobuntwana - Ukuhlaziywa Kuze Kube Sesikhathini. Ikhredithi ku- Abathandi beReal Madrid
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ubusisekile ngonyawo lwesobunxele oluqhakazile, ukulawula okukhulu okusondele iso neso lezinhloso, isizathu esenza ukuba abizwe ngokuthi 'iMessi yaseJapan'. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography ka-Takefusa Kubo's ezithakazelisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
U-Takefusa Kubo wazalwa ngosuku lwe-4th ngoJuni, i-4 ngoJuni 2001 kubazali bakhe; Ubaba wakhe u-Thatfumi Kubo nonina edolobheni lezimboni eKawasaki, eJapan.
UTepfusa Kubo enoYise. Ikhredithi ku-WorldSportsHolic
U-Takefusa Kobo uthokozelwe isizinda semindeni ephakathi nendawo. Umndeni wakhe unemvelaphi evela eKawasaki, idolobha laseJapan elidume nge-baseball yalo, i-athletics yensimu, ibhola lezinyawo, izikhungo ze-Indoor, amabhayisekili kanye nomjaho wamahhashi.
Umsuka ka-Takefusa Kobo
Imibiko evela esizeni somphakathi ikhombisa ukuthi uSputfusa wakhula eyingane kuphela kubazali bakhe, engenamfowethu (udadewabo) noma udadewabo (udadewabo).
Ukukhula uzungeze ubaba othanda ezemidlalo futhi ehlala edolobheni elihlanyiswa yibhola lezinyawo kudala inkambiso yemvelo yokuthi athandane nalo mdlalo omnandi. Kuqala nje, wazibona enesiphiwo ngokwemvelo ngaleli khono lokulawula ukuhamba ngebhola ebhola.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Yize imindeni eminingi ikhulisa izingane zayo ngombono wokuba nemfundo nokuthola imisebenzi engeyona yezemidlalo eJapan, abazali bakaSplfusa Kobo bagcizelele ukuthi indodana yabo ngeke ilulaze imfundo yakhe yebhola likanoma yini.
Eseneminyaka eyisikhombisa, uStepfusa Kubo waqala ukudlala ibhola kwiFC Persimmon, isikole sendawo esizinze edolobheni lakubo iKawasaki.
Ukwenza kwakhe izinto kumbone efunwa kakhulu yizinye izifundiswa endaweni yakhe, nokuholele ekutheni aye eTokyo Verdi e2008 naseKawasaki Frontale e2010. Ngalesi sikhathi, waqala ukuphupha ngebhola lezinyawo laseYurophu.
Ngaleso sikhathi, othisha bakhe esikhungweni semfundo yakhe babazi ukuthi uThatfusa Kobo wayehliselwe izinto ezinhle njengoba babembona enza amakhono akhe ngokungafani nomunye umdlali webhola lezinyawo. Ngakho-ke lapho efaka isimemezelo sokuya ezvivinyweni neklabhu ephezulu yaseJapan exhunywe neFC Barcelona, ​​ukuziqhenya kwabo kwakungekho mngcele.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Impilo Yokunakekela Kwasekuqaleni
Isifiso sikaSuthfusa ngalo mdlalo sambona edlula ezivivinyweni ze-academy futhi ejoyina iqembu laseJapan leqembu lebhola lezinyawo laseBrazil laseJapan. Ubuye futhi wasigcina isitayela sakhe sokudlala njengoba lowo mdlali engahambisa abaphikisi abedlule njengoba bengakaze babekhona.
Ngo-Agasti 2009, uTrayfusa Kobo wanikezwa i-MVP ngomncintiswano lapho abamba iqhaza khona eneminyaka eyisishiyagalombili.
I-Takefusa Kubo- Iminyaka Yokunakekela Kwasekuqaleni ne-FC Barcelona Franchise Academy
Akagcinanga lapho. Ngokushesha ngonyaka olandelayo, ngo-Ephreli 2010, wakhethwa futhi njengelungu leqembu leFC Barcelona School elizobamba iqhaza kwiSodexo European Rusas Cup ebanjelwe eBelgium.
Uthi bewazi? USuthfusa Kobo unikezwe enye iMVP kulo mqhudelwano yize iqembu lakhe liqede endaweni yesithathu. Abaningi bakubona lokhu njengophawu olukhombisa ukuthi uzokuya kude.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Isikole sentsha esidumile seFC Barcelona, ​​uLa Masia uqaphele impumelelo yakhe eJapan. Ngo-Agasti 2011, i-academy yammemela eYurophu ukuze ayozama izivivinyo ngemibala ezindizayo. Lapho bemukelwa, bamvumela ukuthi aqale uBarca Alevin C (U11).
Uthi bewazi?… Ngesizini yakhe yokuqala egcwele (i-2012-13), uTrayfusa wayehola amagoli aphezulu kwiligi yejunior ngokufaka imigomo ye-74 emidlalweni ye-30 kuphela (o yebo, unelungelo lelo!). Thola ngezansi ucezu lobufakazi bevidiyo bokusebenza kwakhe lapho ogibele ngokusebenzisa abaphikisi abaningi. Isikweletu ku-AirFutbol.
Ngemuva kokubuka le vidiyo, Siyaqiniseka ukuthi uvumile ukuthi kulula ukubona ukuthi kungani uToffusa Kobo eye kwathiwa "iMessi yaseJapan'. Faka umbono ngemuva kokufunda le ndatshana ukuze usitshele imicabango yakho.
Ngenkathi ye-2014-15, u-Takefusa Kobo wanyuselwa kwiBarca Infantil A (U14). Ngalesi sikhathi, sakhe ukushayela nokuzimisela kwaba yimpahla yakhe ebaluleke kakhulu. Indlela yokudlala kaToffusa yayifana nokugqama kweRoll Royce exutshwe nenjini kaMustang. Wonke umuntu wambona enakho lokho Lionel Messi imfanelo yenza ibhola enamathiselwe ngokuqinile noma i-glued ukuze imilenze yakhe. Into eyodwa uSepfusa Kobo ayeyithanda ukuthatha phansi abadlali ababemdala futhi bemkhulu kunaye.
I-Takefusa Kubo- Umgwaqo Oya Udumo. Isikweletu ku-AquaVista
Ekuvukeni konyaka we-2015, iBarcelona yangena ngaphansi kwesibonakhulu FIFA ngemuva kokwephula imithetho ngenkathi kusayinwa abadlali eqenjini labo lentsha.
Kwa-Putfusa, umgwaqo weqembu lokuqala uthathe into ebuhlungu kakhulu ngenkathi i-FC Barcelona academy inikezwa incwadi yokudlulisa FIFA ngalokho okwakubizwa ngokuthi ukungahambisani nokudluliswa. Ikilabhu lenqatshelwe ukusayina uTakafusa Kobo yingakho enikeza umyalo osemthethweni wokuthi iBarca ikhiphe ikilabhu.
Ekuqaleni, uKebo wasebenzisa izinyanga ezimbalwa zokugcina zesikhathi sakhe eSpain engadlali ibhola eliholele ekutheni abhekane nokudangala. Njengoba esethole konke lokhu, wanquma ukushiya iklabhu ebuyela eJapan lakubo. Ngenkathi ngiseJapan, uKebo waba nesiqalo esisha sentsha neqembu leFC Tokyo Youth.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
U-Takefusa Kobo noma eJapan ubesazimisele ukwenza iphrofayili ephezulu yokubuyela eYurophu, kulokhu, UNGALOKOTHI neFC Barcelona eyamdumaza. Ngenkathi eseFox Toyko, ithalente elalihle likhushulwe eqenjini elikhulu lekilabhu, umzuzu wokuziqhenya wabazali bakhe.
U-Takefusa Kobo Rise to Fame Indaba kwiFC Tokyo
Ngenkathi kuligi yaseJapan edlala ibhola eliphezulu, uSutfusa waqala waphula amarekhodi. Uthi bewazi?… Waba ngumdlali omncane kunabo bonke waba ngumdlali omncane kunabo bonke emlandweni we-J-League. Lokhu kufake uphawu lokufika kwakhe esigabeni esikhulu ebholeni leklabhu.
Uhambo Olude Luya eYurophu:
Ukufezekiswa kukaSuthfusa Kobo kumbone eza ku-radar yaseManchester City, iBayern Munich neParis Saint-Germain ebimfuna ebonga ngonyawo lwayo lwenxele olucwebile, ukulawula okusondele kakhulu nehlo lokushaya amagoli. Ekuqaleni, kubikwa ukuthi kwenziwa isivumelwano sokuthi abuyele ngokuphepha ku-Bar Barelelona ngaleso sikhathi owaqala ukuguqa ngamadolo ngokusayinwa kwakhe.
Uthi bewazi?… U-Takefusa ukwenqabe ngokuqinile ukubuyela kuFC Barcelona egqugquzela ukuhambela imbangi yakhe, iReal Madrid. Ukuhlikihla usawoti emanxebeni, uTakafusa Kobo ubize iReal Madrid nje nge- $ 1.78m ukumsayina esuka kuFC Tokyo.
U-Takefusa ujoyina iReal Madrid
U-Takefusa Kobo njengamanje ngesikhathi sokubhala usekulungele afakazele umhlaba ukuthi uyisithembiso esilandelayo esihle sesizukulwane sakhe sebhola laseJapan ngemuva kwengano yezwe uHidetoshi Nakata. Manje konke, njengoba besho, manje kungumlando.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokunyuka kwakhe ekubeni nodumo nokujoyina iReal Madrid, abalandeli abaningi babuze lo mbuzo; Ngubani intombi kaTetfusa Kobo noma i-WAG?.
Ubani Intombi KaPutfusa Kobo? - Isikweletu kuya Transfermarkt
Njengasikhathi sokubhala, ukuthandwa okufihliwe kwezothando lukaTepfusa kungenye ebalekela iso lomphakathi ngoba impilo yakhe yothando iyimfihlo futhi okungenzeka ukuthi ayinamidlalo yedrama. Kubukeka sengathi uSuthfusa uthande ukugxila emsebenzini wakhe futhi uye wafuna ukugwema noma yikuphi ukubukwa kwempilo yakhe yangasese. Leli qiniso lenza kube nzima ukuthi ama-blogger azi impilo ka-Takefusa Kobo futhi ayathandana nomlando wokuthandana.
Kodwa-ke, ngenxa yobudala bakhe obusha nokutholwa yiklabhu enkulu kunazo zonke emhlabeni engathetheleli ezinganeni ezincane ezingakwazi ukuhlaba umxhwele, kungenzeka ukuthi uTepfusa angashada futhi kungenzeka angathandani namuntu. Yize sibona abantu abasha beminyaka yakhe bethandana, ngakho-ke, singacabanga nokuthi kungenzeka abe nentombi kodwa akhethe ukungayenzi emphakathini.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi impilo yakho ka-Takefusa kungakusiza ukuthi uthole isithombe esiphelele sobuntu bakhe kude ne-play pitch.
Kude endaweni yebhola, u-Takefusa ubala, mnene, unothando, uyakhuthaza, akaze akhangqe futhi unekhono lokuzivumelanisa nokufunda ngokushesha ukuguqula imvelo namasiko.
Ama-Takefusa Kubo Amaqiniso Wokuphila Komuntu. Ikhredithi ku- BeSoccer
U-Takefusa Kobo uhlala ekhangwa ngumhlaba uqobo. Unelukuluku lokwedlulele, enomuzwa ohlala njalo wokuthi asikho isikhathi esanele sokuba athethelele abalandeli beMadrid ukuthi ulunge kangakanani.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
U-Takefusa unenhlalo enkulu futhi uthanda ukuchitha isikhathi nabangane nomndeni, ikakhulukazi amalungu amancane. Umndeni ubaluleke kakhulu kuye futhi ukuchitha isikhathi kwakha ubuhlobo obuqinile bemizwelo nabo.
Impilo Yomndeni ka-Takefusa Kubo
Ngenkathi abezindaba befaka imininingwane kababa wakhe, kuncane imininingwane etholakala ngomama wakhe. Kucatshangwa ukuthi umama kaTepfusa Kubo une wenze isinqumo esiqondile sokungafuni ukwamukelwa ngumphakathi.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - LifeStyle
Ukunquma phakathi kokusebenziseka nenjabulo okwamanje akusona isinqumo esinzima se-Takefusa.
Yize ekholelwa ukuthi ukwenza imali ebholeni kuyinto embi edingekayo. U-Takefusa unesisekelo esiqinile sendlela angayigcina ngayo imali yakhe futhi ihlelekile. Njengasikhathi sokubhala, akaphili impilo yobukhazikhazi obonakala kalula yizimoto ezimbalwa ezibizayo njengoba kubonwe ngezansi.
Amaqiniso we-Takefusa Kobo. Ikhredithi Goal.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Kwazalwa uNyakaFutusa: Kwenzekile umcimbi olandelayo;
Kulowo nyaka, ngoSepthemba 11, 2001, okwaziwa njengokuhlasela kwe9 / 11 kwenzeka. Ishumi nesishiyagalolunye abaduni ngasikhathi sinye bathatha izintambo zezindiza ezine zaseMelika ezentengiselwano zashayisa izindiza ezimbili kuWorld Trade Center eManhattan, eNew York City.
Unyaka i-2001 wawaziwa njenge- “Ihlobo Lonyaka Woshaka“. Ngunyaka owaqopha inani eliphakeme kakhulu lokushona koshaka.
Ngawo lowo nyaka i-2001, Izinkampani Zemithi emhlabeni wonke ziyavuma ukuthengisa izidakamizwa ze-Aids ngamanani entengo aseduze e-Afrika, isaphulelo esifinyelela ku-90% ukusiza ukulwa nalesi sifo esibulalayo.
Ngama-26th kaJanuwari ngalowo nyaka, ukuzamazama komhlaba okuyisikalo okulinganisa i-7.9 ku-Richer wadogo jolst Gujarat of India, kwashona abantu be-20,000 kwalimaza abanye be-167,000.
Amaqiniso we-Takefusa Kubo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isifinyezo sevidiyo
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Takefusa Kobo Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Ronald Koeman Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
I-Mariano Diaz Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Adamu Traore Ubuntwana Wezindaba Zobuntu ne-Untold Biography Amaqiniso
Amaqiniso we-Ansu Fati Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso
I-Denis Cheryshev Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Septhemba 23, 2018
Usuku olushintshiwe: Septhemba 17, 2020
I-Toni Kroos Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Julayi 20, 2020